Pa'O Self-Administered Zone (Burmese: ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ [pəʔo̰ kòbàɪɴ ʔoʊʔtɕʰoʊʔ kʰwɪ̰ɴja̰ dèθa̰]), as stipulated by the 2008 Myanmar Constitution, isaself-administered zone consisting of3townships in Shan State:
^ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) (in Burmese). 2008. ^ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) (in Burmese)
^ "တိုင်းခုနစ်တိုင်းကို တိုင်းဒေသကြီးများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများ ရုံးစိုက်ရာ မြို့များကို လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွင် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်များကို လည်းကောင်း သတ်မှတ်ကြေညာ". Weekly Eleven News (in Burmese). 2010-08-20. Retrieved 2010-08-23. v
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%27O_Self-Administered_Zone&oldid=768822976"	Categories: Self-administered zones of MyanmarSubdivisions of MyanmarHidden categories: CS1 Burmese-language sources (my)Articles containing Burmese-language textCoordinates on Wikidata	Navigation menu
한국어Italianoမြန်မာဘာသာ日本語Norsk bokmålРусскийไทยУкраїнська	Edit links	This page was last edited on6March 2017, at 00:16.